HomenewsCrush ကို ဖှငျ့ပွောဖို့ ရှကျနတေဲ့သူတှကေို ဝနျဆောငျမှုပေးမယျ့ ကုမ်ပဏီ
Crush ကို ဖှငျ့ပွောဖို့ ဆိုတာ ရငျတုနျပနျးတုနျ ဖွဈစရာကိစ်စပါပဲ။ အထူးသဖွငျ့ သငျ့ crush က ဘယျလို သဘောထားရှိလဲ ဆိုတာ မသခြောတဲ့ အခြိနျမြိုးမှာပေါ့။ crush က ငွငျးလိုကျမယျဆိုရငျ သငျဟာ အသညျးတှလေညျး ကှဲ၊ အရှကျတှလေညျး ကှဲနိုငျပါတယျ။
ရိုးရိုးသားသား ပွောရရငျ အသညျးကှဲတဲ့ ခံစားခကျြက ကမ်ဘာပျေါမှာ မကောငျးဆုံး ခံစားခကျြပါပဲ။ အဲဒါကွောငျ့ crush ကို ဖှငျ့ပွောရာမှာ အောငျမွငျတဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေို အကောငျးဆုံး အသုံးခနြိုငျဖို့နဲ့ ကဉျြးကပျြတဲ့ အခွအေနကေနေ ထှကျနိုငျဖို့ ဝနျဆောငျမှုပေးတဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခု ဂပြနျနိုငျငံမှာ ရှိပါတယျ ။
ကုမ်ပဏီရဲ့နာမညျက Kokunavi လို့ချေါပွီး " အခဈြကို ဖှငျ့ပွောခွငျး " ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျနဲ့ " လမျးညှနျခွငျး " ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျကို ပေါငျးစပျထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။ Kokunavi ကုမ်ပဏီက crush ကို သငျ့ကိုယျစား ဖှငျ့ပွောပေးရာမှာ ကွားလူအဖွဈ ဆောငျရှကျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
သငျက ကုမ်ပဏီကို လိုအပျတဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို ပေးရမှာပါ။ တဈခုတော့ ရှိပါတယျ။ crush က သငျ့ကို အဈကိုတဈယောကျလို ၊ အဈမတဈယောကျလိုပဲ ခဈြဖို့ ရှေးခယျြလိုကျမယျ ဆိုရငျတော့ ပွနျအမျးငှကေို သငျရမှာ မဟုတျပါဘူး ။
Kokunavi ကုမ်ပဏီမှာ သငျ့အခဈြတှကေို အစပြိုးနိုငျဖို့ အတှကျ အစီအစဉျ သုံးခုရှိပါတယျ။
1. The Simple Course-29000 ယနျး
ဒီ package မှာ Kokunavi ကုမ်ပဏီက သငျပွောလိုတဲ့ စကားကို crush သိစဖေို့ အစပြိုးပေးမှာပါ။ crush က ဘယျလို တုံ့ပွနျမလဲ ဆိုတာ သငျ သိနိုငျပါတယျ။
2. The Support Pack Course -59000 ယနျး
ဒီ package က ပိုကောငျးလာပါတယျ။ ဖှငျ့ပွောဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျနဲ့ နရောတှကေိုလညျး စီစဉျပေးမှာပါ။ အငျတာနကျမှာ ဖှငျ့ပွောနညျးတှကေ ရိုးနတေဲ့အတှကျ သငျ့ crush နဲ့ သီးသနျ့ ဖှငျ့ပွောနိုငျအောငျ အသအေခြာကို စီစဉျပေးမှာပါ။ သငျပွောလိုတဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျ အားလုံးကို ကုမ်ပဏီနဲ့သငျကွားမှာ နှဈခါ သို့မဟုတျ သုံးခါ ဆှေးနှေးရမှာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ့ crush ကို ဖှငျ့ပွောရမှာ ဖွဈပျေါလာမယျ့ အခွအေနကေို သငျကိုယျတိုငျ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ထိနျးခြုပျနိုငျမှာပါ။
3. The Premium Course -149000 ယနျး
ကုမ်ပဏီက ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှနေဲ့ အကအြေလညျ ဆှေးနှေးခှငျ့ ငါးကွိမျ ရရှိမှာပါ။ crush ကို ဖှငျ့ပွောတဲ့အခါ အောငျမွငျနိုငျဖို့အတှကျ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ လလေ့ာပွုစုထားတဲ့ အခကျြတှထေဲကနေ ဘယျနညျးလမျးက သငျနဲ့သငျ့တျောမလဲ ဆိုတာ ရှေးခယျြပေးဦးမှာပါ။
" သငျခဈြနတေဲ့အကွောငျးကို ဖှငျ့ပွောရမယျ့သူရှိသရှေ့ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီက အားလုံး စီစဉျပေးနိုငျပါတယျ" လို့ Kokunavi ကုမ်ပဏီက ပွောပါတယျ။ သငျခဈြနတေဲ့ အကွောငျးတှေ သှားပွောပေးမယျ့ အောငျသှယျတျောနဲ့ သငျ့ crush နဲ့ ဇာတျလမျးလေးတှေ ငွိသှားမှာကိုတော့ စိုးရိမျစရာ မရှိပါဘူး။ ကုမ်ပဏီက အောငျသှယျတျော အမြိုးသားရော အမြိုးသမီးပါ ရှိပါတယျ။ ကဲ.. ဖှငျ့ပွောရမယျ့သူရှိရငျ မွနျမွနျသာ လှုပျရှားလိုကျပါတော့။
Crush ကို ဖွင့်ပြောဖို့ ရှက်နေတဲ့သူတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် ကုမ္ပဏီ
Crush ကို ဖွင့်ပြောဖို့ဆိုတာ ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်စရာကိစ္စပါပဲ။ အထူးသဖြင့် သင့် crush က ဘယ်လို သဘောထားရှိလဲ ဆိုတာ မသေချာတဲ့ အချိန်မျိုးမှာပေါ့။ crush က ငြင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အသည်းတွေလည်း ကွဲ၊ အရှက်တွေလည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် အသည်းကွဲတဲ့ ခံစားချက်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ မကောင်းဆုံး ခံစားချက်ပါပဲ။
အဲဒါကြောင့် crush ကို ဖွင့်ပြောရာမှာ အောင်မြင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့ ကျဉ်းကျပ်တဲ့ အခြေအနေကနေ ထွက်နိုင်ဖို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှိပါတယ် ။ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်က Kokunavi လို့ခေါ်ပြီး " အချစ်ကို ဖွင့်ပြောခြင်း " ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ " လမ်းညွှန်ခြင်း " ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Kokunavi ကုမ္ပဏီက crush ကို သင့်ကိုယ်စား ဖွင့်ပြောပေးရာမှာ ကြားလူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က ကုမ္ပဏီကို လိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ပေးရမှာပါ။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ crush က သင့်ကို အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ၊ အစ်မတစ်ယောက်လိုပဲ ချစ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ ပြန်အမ်းငွေကို သင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
Kokunavi ကုမ္ပဏီမှာ သင့်အချစ်တွေကို အစပျိုးနိုင်ဖို့ အတွက် အစီအစဉ် သုံးခုရှိပါတယ်။
1. The Simple Course-29000 ယန်း
ဒီ package မှာ Kokunavi ကုမ္ပဏီက သင်ပြောလိုတဲ့ စကားကို crush သိစေဖို့ အစပျိုးပေးမှာပါ။ crush က ဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲ ဆိုတာ သင် သိနိုင်ပါတယ်။
2. The Support Pack Course -59000 ယန်း
ဒီ package က ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ဖွင့်ပြောဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်နဲ့ နေရာတွေကိုလည်း စီစဉ်ပေးမှာပါ။ အင်တာနက်မှာ ဖွင့်ပြောနည်းတွေက ရိုးနေတဲ့အတွက် သင့် crush နဲ့ သီးသန့် ဖွင့်ပြောနိုင်အောင် အသေအချာကို စီစဉ်ပေးမှာပါ။ သင်ပြောလိုတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက် အားလုံးကို ကုမ္ပဏီနဲ့သင်ကြားမှာ နှစ်ခါ သို့မဟုတ် သုံးခါ ဆွေးနွေးရမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် သင့် crush ကို ဖွင့်ပြောရမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အခြေအနေကို သင်ကိုယ်တိုင် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြည့်ပြည့်ဝဝ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။
3. The Premium Course -149000 ယန်း
ကုမ္ပဏီက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ အကျေအလည် ဆွေးနွေးခွင့် ငါးကြိမ် ရရှိမှာပါ။ crush ကို ဖွင့်ပြောတဲ့အခါ အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေ့လာပြုစုထားတဲ့ အချက်တွေထဲကနေ ဘယ်နည်းလမ်းက သင်နဲ့သင့်တော်မလဲ ဆိုတာ ရွေးချယ်ပေးဦးမှာပါ။
" သင်ချစ်နေတဲ့အကြောင်းကို ဖွင့်ပြောရမယ့်သူရှိသရွေ့ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက အားလုံး စီစဉ်ပေးနိုင်ပါတယ်" လို့ Kokunavi ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။ သင်ချစ်နေတဲ့ အကြောင်းတွေ သွားပြောပေးမယ့် အောင်သွယ်တော်နဲ့ သင့် crush နဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ငြိသွားမှာကိုတော့ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ ကုမ္ပဏီက အောင်သွယ်တော် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ရှိပါတယ်။ ကဲ.. ဖွင့်ပြောရမယ့်သူရှိရင် မြန်မြန်သာ လှုပ်ရှားလိုက်ပါတော့။